lacag - ALinks
Waxaa laga yaabaa 28, 2020 Shubham Sharma lacag, UK
Qeybta bangiyada ee Boqortooyada Midowday (UK) waa mid aad u ballaaran marka la barbar dhigo waaxaha kale. Bangiyada ku yaal Boqortooyada Midowday oo bixiya adeegyo kala duwan. Loogu talagalay furitaanka xisaab bangi. Halkan waxaa ku yaal dulmarka qaar ka mid ah
Bangiyada ugu fiican Mareykanka
April 2, 2020 Antika Kumari lacag, USA
Marka maskaxda lagu hayo halka lagu dhigayo lacagtiisa qof lagu keydiyo, liiska xulashooyinka bangiga waxay umuuqdaan kuwo aan dhamaaneyn. Hay'ado yaryar oo kala duwan oo maxalli ah ayaa kugu deeqi kara lacagtaada shaqo adag. Laakiin adeeg dhammaystiran iyo bangi aad u fog, ayaa bangiyada qaranka ugu waaweyn xukunta